Amathiphu okuvakashela e-Riviera Maya | Izindaba Zokuhamba
Amathiphu okuvakashela e-Riviera Maya
UMariela Carril | 04/01/2022 17:00 | Kubuyekezwe ku- 19/12/2021 13:48 | Amathiphu, I-México
Enye yezindawo ezivakashelwa kakhulu eMexico yiRiviera Maya. Uma uthanda ilanga, ulwandle nolwandle, lena ingenye yezindawo ezifunwa kakhulu eMelika, ngakho-ke namuhla e-Actualidad Viajes sizokunikeza ulwazi futhi amathiphu okuvakasha e-Riviera Maya.
Ngobhubhane le ndawo isihlupheke kakhulu kodwa kancane kancane ezokuvakasha seziqala ukubuya, ngakho bhala amaphuzu ohambo lwakho olulandelayo.
1 I-Riviera Maya
2 Amathiphu okuvakashela e-Riviera Maya
Kuyinto ogwini loLwandle lweCaribbean, esifundazweni saseMexico saseQuintana Roo, cishe amakhilomitha angu-210 isiyonke, engxenyeni esempumalanga ye- I-peninsula yaseYucatan. Lapha kuphela kunamahhotela angama-405 ezigaba ezahlukahlukene, anokunikezwa cishe kwamakamelo angama-43.500. Futhi yebo, iningi linikeza uhlelo oluhlanganisa konke, olusebenza kakhulu.
Indawo imbozwe ngu-a ihlathi eliphakathi nendawo elishisayo omisiwe, amabhishi ayi-coral sand, amanzi acwebile nafudumele, avamile eCaribbean, futhi njengoba izwe liyitshe le-limestone miningi imigede ngaphansi komhlaba noma imigede, namuhla enye into eheha izivakashi.
Amaphuzu ayinhloko ezithakazelisayo ku-Riviera Maya kukhona Puerto Morelos, cishe amakhilomitha angu-16 ukusuka eCancun International Airport kanye nama-32 ukusuka Cancun okufanayo. Idolobhana elingasogwini, elinemvelaphi yokudoba, elinomoya onokuthula.
Kunjalo futhi I-Playa del Carmen, idolobha elibaluleke kakhulu nelikhulu kunawo wonke e-Riviera, elinamahhotela amaningi, izitolo nezindawo zokudlela, Kunamakhilomitha amane ezindawo ezihamba ngezinyawo namabhishi futhi kuyisiqalo ukuvakashela Cozumel. Enye indawo okuyiwa kuyo I-Puerto Aventuras.
IPuerto Aventuras iyindawo yokuvakasha kanye nentuthuko yezindawo zokuhlala enomoya we-nautical, ene-marina ehamba phambili enhlonhlweni, inkundla yegalofu namabhishi amangalisayo. Mlandele Akumal, enamahhotela ambalwa kodwa enechweba elihle lase-Yalku le-snorkeling, ama-cenotes nezixhobo ezisogwini. Lapha awukwazi ukuphuthelwa ukuvakashela i-Aktun Chen, umhume omuhle onamagumbi amathathu, i-cenote yawo kanye nama-stalactites amaningi nama-stalagmites.
Tulum Ikhadi leposi lakudala kakhulu. Indawo yogu lwemivubukulo iyisithombe esihle. Idolobha laseMayan elibiyelwe ngezindonga, namuhla kukhona amahhotela nezindawo zokudlela, akhona amanxiwa e-cobá, eqhele ngamakhilomitha angaba ngu-40, futhi kukhona namacenote amaningana. Uma sikhuluma ngeCobá, kungenye indawo yokuvubukula yamaMayan, amakhilomitha angama-90 ukusuka Chichen Itza.
Kubathandi bemvelo kukhona I-Sian Ka'an Biosphere Reserve, ogwini lwaseCaribbean, Indawo Yamagugu Omhlaba kusukela ngo-1987.
Uma uzohamba ngemoto kumele uze nayo ilayisense yokushayela yamazwe ngamazwe.Endabeni yami, ngihlala ngiyicubungula e-Automobile Club ezweni lami futhi ingochwepheshe kakhulu. Kamuva, uma uzoqeqeshelwa umdlalo othile ofana nokuhamba ngomkhumbi neminye, kufanele uphathe izitifiketi zakho. Umshwalanse we mpilo futhi, kunjalo.
Ngokuphathelene lwemali yamanje iyona I-peso yaseMexico kodwa ezindaweni eziningi zezivakashi zamukelwa ngokulinganayo Amadola aseMelika nama-euro. Okuyinhloko amakhadi esikweletu Zivamile futhi (i-Visa, i-Mastercard, i-American Express), kodwa hhayi ezitolo ezincane nasezitaladini zasemgwaqweni, ngakho-ke kuhlale kukulungele ukuba nama-pesos esandleni, ikakhulukazi uma uhamba ohambweni.
Kunama-ATM amaningi eCancun naseRiviera Maya, kodwa ungabathembi futhi noma nini lapho usuka ehhotela ngalolu hlobo lohambo, thatha eyakho imali. Uzodinga uma ufuna ukuthenga amanzi, i-sunscreen, umsebenzi wezandla owuthandayo noma shiya ithiphu. Lapha eMexico into evamile ukushiya i-10 kanye ne-15% yesamba sebhili kumabha nezindawo zokudlela, kodwa kulula ukuyihlola ngoba ezinye izingosi sezivele ziyifakile. Futhi yebo, futhi kuyisiko ukunikeza abaqondisi bokuvakasha.
Kufanele uye nini e-Riviera Maya? Nokho, kuyashisa futhi kunomswakama unyaka wonke, kodwa lina phakathi kukaMeyi no-October futhi kusukela ngoJuni kuya kuNovemba kuyinkathi yeziphepho. Isikhathi esomile siphakathi kukaNovemba no-April enamazinga okushisa amnandi acishe abe ngu-25ºC, nakuba ngo-January nango-February ubusuku bungabanda. Imimoya yaseNyakatho ingaletha amafu athile kanye nemvula ethile ngoDisemba nangoJanuwari. Ngaphandle kwamaholide, lawa madethi ngokuvamile athathwa njengesizini ephansi ngakho-ke kukhona izintengo ezingcono kanye nabantu abambalwa.
Ngokolunye uhlangothi, isikhathi semvula siphakathi kukaMeyi no-Okthoba nemvula nokushisa nomswakama. Imvula ingaba nkulu futhi ibe mfushane futhi ngemva kwesikhashana ilanga liyaphuma. Isikhathi esiphezulu siphakathi kukaJuni no-Agasti bese amanani entengo ebiza kakhulu futhi kuba nabantu abaningi. Ukukhuluma iqiniso, okubi kakhulu yinkathi yeziphepho, kusukela ngoJuni kuya kuNovemba, kodwa ikakhulukazi phakathi kuka-August no-Okthoba. Kayisikho ukuthi kukhona izivunguvungu minyaka yonke njalo isimo sezulu siyasibona ngesikhathi kodwa izindlela zokuzivikela azisuswa.
Izivakashi eziyizigidi ezingu-15 zivakashela i-Riviera Maya ne-Cancun njalo ngonyaka, ngakho iyindawo ephephile. Yebo, ngibonile futhi izindaba zakamuva mayelana nokudubula ezindaweni zezentengiselwano ... Ngeshwa ukushushumbiswa kwezidakamizwa kuyingozi futhi kufanele sikucabangele lokho kodwa kubonakala kimina ukuthi akusona isizathu sokukhansela le ngxenye yeMexico endaweni yethu. uhlu lwezindawo zokuvakasha. Ngokuphathelene nezinye izinyathelo zokuphepha, kufanele uthathe ezijwayelekile.
Ngenhlonipho ku ezokuthutha endaweni kukhona konke, kusukela amabhasi namatekisi eziya eziqashweni izimoto kanye nezinsiza ezizimele. Izokuthutha ozikhethayo zizoncika ezinhlelweni zakho. Uma uya ohambweni mhlawumbe ungaqasha imoto noma ubhalisele uhambo lokuya nokubuya oluhlanganisa usizo lomhlahlandlela namathikithi. Uma uyothenga, cela itekisi ehhotela futhi voila. Uma uzomisa eyodwa emgwaqeni, qinisekisa ukuthi inelayisensi futhi ulungise nenani lohambo njengoba lingekho imitha.
Ungakwazi yini ukuphuza amanzi ompompi? Ngokuvamile, cha Futhi noma ngithi yebo, akukufanelanga. Ingabe ukhona ofuna ukuchitha iholide lakhe endlini yokugezela ephethwe isisu? Hlala uncamela amanzi asebhodleleni.
Ekugcineni, Kufanele uhlale kuphi? Kukhona eziningi wonke amahhotela afaka wonke umuntu futhi zihlale ziyinketho engcono kakhulu. Ikakhulukazi uma udlula endaweni yaseCancun. Manje, uma uzovakashela i-Riviera Maya futhi ikakhulukazi i-Cozumel ne-Playa del Carmen kunamahhotela amahle njengeRoyal Hideaway Playacar yabantu abadala kuphela, noma i-Occidental e-Xcaret noma i-Allegro Playacar e-Playa del Carmen. I Iqembu laseBarceló Inezindawo eziningi zokuhlala kule ngxenye yeMexico.
Yini engeke iphuthelwe ohambweni oluya e-Riviera Maya?
Vakashela i-Akumal Ecological Center
I-Snorkel ku-Cenote Dos Ojos
Vakashela i-Holbox Island, amahora amabili ukusuka e-Riviera Maya. Ingamakhilomitha angu-42 kuphela ubude, kodwa igcwele izinyoni zasezindaweni ezishisayo.
I-Playa del Carmen, i-Rio Secreto
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » I-México » Amathiphu okuvakashela e-Riviera Maya
Lanzarote: yini ongayibona